Odoroska xalka ismari waagga siyaasadda Soomaaliya waa dagaal | KEYDMEDIA ENGLISH
5. Dowladda Federaalka oo cagta saartay waddadii kacaanka milateriga 21 Oktoobar oo 1991 xukunka looga tuuray dagaal, waxayna soo nooleysay ciidankii guulwadayaasha oo hadda loo bixiyay “xoogagga wadaniyiinta,” lana siiyo lacag taaso ka soo horjeeda dastuurka kmg; Ciidammada xoogga dalka, Nabadsugidda, booliska, iyo Asluubta iyo cidammo kale ee ka baxsan dastuurka waxay ku milmeen siyaasadda oo dastuurka ka mamnuucayo; Maxkamadihi, shaqaalaha dowladda, guddiyadii madaxa-bannaanna oo lagu khasbay inay daacad u noqdaan Madaxweynaha ee aysan daacad u noqon dastuurka iyo sharciga lagu dhaariyay, taaso ah dhaqankii xukunkii Milateriga ee kacaanka hantiwaagga ama keliga taliska ahaa.
Xukunkaas oo ku jira dowladaha taagersan Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmajo. Waxaa la xaqiijinaya in dalka Eritrea tababar loo geeyay ciidammo aan la ogeyn waqtiga, habka, iyo nidaamka lagu qoray, kana qayb galeen dagaalka ka socda Ethiopia dhexdeeda, lana filayo in la keeno Soomaaliya waqti dhow si ay horseed ugu noqdaan dagaallo dowladda federaalka damacsan tahay inay dhawaan ka bilawdo Benadir, Hirshabelle, Galmudug, iyo Jubbaland, si loo xaqiijiyo boobka doorashada 2020/2021.
6. Madaxweyne Farmajo iyo adeegayaashiisa waxay aaminsan yihiin in maamulka doorashada federaalka mas’uul ka yihiin, mucaaradka iyo muwaadiniinta kalena laga rabo daacadnimo iyo u hoggansanaan awaamirta dowladda federaalka. Madaxweyne Farmajo ma aqoonsana waajibaadka dastuurka federaalka amrayo oo ah in doorashada tahay xil ka dhexeeya mucaarad, muxaafid, iyo dhexdhexaad, waajibkana yahay in doorashada maamulaan dad dhinacyada tartamaya ku kalsoon yihiin, dhexdhexaad ah, doorashada noqoto mid xor iyo xalaal ah, waqtigeeda ku dhacda, daahfuran, loo siman yahay, mucaaradka raalli ka yihiin, korjoogayaal madaxbannaan xaqiijin karaan in doorashada ku dhacday si xaq ah.
Sidaa darted, madaama Madaxweyne Farmajo aqoonsaneyn, diidan yahay ilaalinta xorriyada iyo xuquuqda muwaadiniinta soomaaliyeed, ku dhaqanka dastuurka, dhaqanka wanaagsan ee dowladnimo, hirgelinta doorasho xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacda, isla markaana beesha caalamka ka gaabsatay inay si degdeg ah u soo dhexgasho ismariwaa iyo colaadda hureysa, waxaa odoroska yahay dagaal khasaaro xun ka dhalan doono. Waxaan ilaahey ka baryaya inuu Madaxweyne Farmajo ku hanuuniyo dariiqa toosan ee ay ku jirto maslaxadda Soomaaliyeed oo ka weyn, kana qiimo badan inuu xukunka ku waaro.